कामै नगरी भुक्तानी
बैतडी (अस) । बैतडीमा सञ्चालित सामाजिक विकास तथा सचेतना समाज (स्वदेस) संस्थाले सम्झौता अनुसारको कामै नगरी भुक्तानी लिएको पाइएको छ । गत वर्ष संघीय सरकारले पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनका लागि विशेष अनुदानवापत रू. ६० लाख दिएको थियो । त्यसबाट गाउँपालिकामा १८ स्थायी पोलिहाउस,...
१०० विद्युत् महशुल बुझाउन १५०० खर्च
माघ १६, डोटी । डोटी जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण भेकमा रहेका नागरिकले विद्युत्को न्यूनतम महशुल मूल्य रू. १०० बुझाउन रू. १ हजार ५०० खर्च गर्नु परिरहेको छ । जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी तथा पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायलबाट टाढा बसोबास गर्नेले वर्षौंदेखि यस्तो नियति झैल्दै आएका छन् । जिल्लाका बाझकाका...
सुदूरपश्चिम औद्योगिक व्यापार मेला फागुन ७ गतेदेखि शुरु
माघ १३, भीमदत्तनगर । आगामी फागुन पहिलो सातादेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय औद्योगिक व्यापार मेला तथा कञ्चनपुर पर्यटन महोत्सव आयोजना हुने भएको छ । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघ र भीमदत्त नगरपालिकाको संयुक्त सहकार्य फागुन ७ देखि १७ गतेसम्म पर्यटन महोत्सव हुन लागेको कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष...
गेटा मेडिकल कलेज निर्माण तीव्र
धनगढी । सुदूरपश्चिमबाटै चिकित्सा शास्त्र अन्तर्गत एमबीबीएसको पढाइ सञ्चालन गर्न गोदावरी नगरपालिका–५ गेटामा ‘गेटा मेडिकल कलेज’ निर्माण तीव्र पारिएको छ । कलेज निर्माणका लागि यसअघि तयार पारिएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)ले यसका लागि रू. ८ अर्ब लाग्ने देखाएको छ । मेडिकल कलेज न...
भ्रष्टाचारका बढी उजुरी पर्नेमा बैतडी तेस्रो
बैतडी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमध्ये बैतडी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारका उजुरी पर्नेमा तेस्रोमा छ । स्थानीय तहका भ्रष्टाचार सम्बन्धी धेरै उजुरी पर्ने जिल्लामा कैलाली र कञ्चनपुरपछि बैतडी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरले जानकारी दिएको छ । ...
भीमदत्त बसपार्क उद्घाटन
महेन्द्रनगर (अस) । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–४ निर्मित आधुनिक बसपार्कको उद्घाटन गरिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएको झन्डै डेढ वर्षपछि मंगलवार नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले बसपार्कको उद्घाटन गरेका हुन् । उक्त बसपार्क भीमदत्त नगरपालिकाले नगर विकास...
दलित विद्यार्थी मात्र पढ्ने विद्यालयलाई बेवास्ता
बैतडी (अस) । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–४ को दशरथ प्राथमिक विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारमा सम्बद्ध निकायले ध्यान दिएको छैन । जिल्ला सदरमुकाम गढीमा रहेको सो विद्यालयको भौतिक संचना निर्माण तथा सुधारमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको हो । स्थानीय, प्रदेश र केन्द...
कैलालीमा खुल्यो क्षयरोग अनुसन्धान केन्द्र
धनगढी (अस) । कैलालीमा क्षयरोग अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएको छ । गोदावरी नगरपालिका–६ श्रीपुरमा लक्ष्मीनारायण क्षयरोग उपचार प्रेषण तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनमा आएको हो । अनुसन्धान केन्द्रको सोमवार बेल्जियमकी अधिराजकुमारी एस्ट्रिड र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले संयुक्त रू...
‘भूमि बैंकमार्फत भूमि समस्याको समाधान’
धनगढी । भूमि बैंकमार्फत भूमि समस्याको समाधान तथा बजारको खोजी गरिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताएकी छिन् । धनगढीमा आइतवार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले यसअघि ४ प्रकारमा वर्गीकृत भूमिको प्रकार बढाएर ९ पु¥याइएपछि समस्या समाधानको बाटो खुलेको धारणा रा...
शुक्लाफाँटामा दोस्रो प्रवेशद्वार खुला
महेन्द्रनगर (अस) । कञ्चनपुरको बेलडाँडीबाट शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश सहज बनाउन प्रवेशद्वार खुला गरिएको छ । बेलडाँडीबाट पर्यटकलाई जंगल सफारी गराउने उद्देश्यले शनिवार नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र खानेपानी मन्त्री बिना मगरले संयुक्त रूपमा प्रवे...